Lahatsoratra nataon'i Tanya Singh momba ny Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Tanya Singh
Ny haben'ny tsenan'ny fandoavam-bola nomerika eran-tany dia antenaina hatramin'ny USD 79.3 miliara amin'ny taona 2020 ka hatramin'ny USD 154.1 miliara amin'ny 2025, amin'ny tahan'ny fitomboana isan-taona (CAGR) 14.2%. MarketsandMarkets Raha dinihina ity, tsy manana antony hampiahiahy an'io isa io isika. Raha misy, raha jerentsika hatrany ny krizy coronavirus ankehitriny, dia hitombo ny fitomboana sy ny fananganana. Virosy na tsy misy virus, ny fiakaran'ny fandoavana tsy misy fifandraisana dia efa eto. Satria mandainga ny poketra finday avo lenta